About Us - Chengdu Yixinhe Import iyo co ganacsiga dhoofinta, Ltd.
Chengdu Yixinhe Import iyo co ganacsiga dhoofinta., Ltd waxa uu ku yaalaa Pujiang, Chengdu, ee gobolka Sichuan, China.We ayaa ku hawlan dejinta miro iyo ganacsiga dhoofinta sannado badan oo cusub.
waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah miraha cirtus, midho kiwi, Actinidia SSP, pomelo malab, orange Mandarin fool xun, Ehime Mandarin orange etc.We sooco, si ay ugu deeqdo "caafimaad, nafaqo leh iyo delicious" miro daray ah ujeeddo ah maamulka shirkada. Our midho ayaa la ogaan karo qaybaha awoodda iyo kulmay heerarka suuqa wax soo saarka beeraha ee caalamiga ah.
Waqtigan xaadirka ah, Shirkadda ayaa maamulka ah oo tayo leh oo dhamaystiran iyo sayniska system.With our daacadda iyo xoog, oo tayo fiican leh, alaabta waxaa si balaadhan looga aqoonsan yahay oo ku kalsoon by industry.We ku balanqaad inay ku siiyaan midhaha ugu jaban prices.We jumlada eekaan ah mabda'a ah "Tayada ugu horeysay, Daacadnimo saldhig" iyo ourself sooco, si kor loogu qaado wacyiga ee shirkadaha iyo kor u qaado horumarka of warshadaha midhaha ee Shiinaha.
saaxiibada Welcome ka adduunka oo dhan ka yimaadaan si ay u booqdaan, siin hanuun iyo kala hadli cooperation.We rajeynaynaa in aan la xirrira xiriirka ganacsi guul leh macaamiisha cusub oo dunida ku mustaqbalka.